SAWIRRO:-Qarax loogu xiray Ganacsade Caan ah oo la fashiliyay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
SAWIRRO:-Qarax loogu xiray Ganacsade Caan ah oo la fashiliyay
Taliska Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka NISA ee dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa soo bandhigay qarax miino nooca gaadiidka lagu dhejiyo oo habeenkii xalay aheyd ay sheegeen inay fashiliyeen.
Qoraal kasoo baxay Taliska NISA Jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in qaraxa la fashiliyay markii horey lagu xiray gaari uu lahaa mid kamid ah Ganacsatada kunool Magaalada Kismaayo ee Xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Sidoo kale NISA Jubbaland ayaa sheegtay in lagu guuleystay in gaariga laga furo miinada lagu xiray, iyadoo oo aan waxyeelo gaarsiin gaariga, isla markaana laamaha amniga ay ka horteen arrintaas.
“Hay’adda Sirdoonka & Nabadsugida Jubaland ayaa Fiidnimadii xalay fashilisay Miino nooca Gaadiidka lagu dhajiyo ah oo lagu xiray gaari uu lahaa mid kamid ah ganacsatada Magaalada Kismaayo. Waxaana lagu guuleystay in laga furo miinadii iyada ooo aan waxba soo gaarin gaarigii” ayuu yiri Qoraalka kasoo baxay NISA Jubbaland.
Taliska Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka NISA ee dowlad Goboleedka Jubbaland ma shaacin magaca Ganacsadaha gaarigiisa loogu xiray Qaraxa, kaasi oo la doonayay in lagu khaarijiyo qaraxa.
Guddoomiyaha G/Banaadir oo si kulul uga hadlay dagaal ka dhacay Muqdisho